ရင်​နင့်​ဖွယ်​ဖြစ်​ရပ်​ဆိုး A 12-year-old girl from Rathedaung township informed | Danya Wadi
»Articles»ရင်​နင့်​ဖွယ်​ဖြစ်​ရပ်​ဆိုး A 12-year-old girl from Rathedaung township informed
Posted by danyawadi on October 12, 2017 in Articles, ဆောင်းပါးများ
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ထုတ်တဲ့ ကုလ သမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် သက်သေမိန်းကလေးရဲ့ ထွက်ဆိုချက်
“သူတို့က ကျမတို့အိမ်ကို ဝိုင်းထားလိုက်တယ်။ သူတို့ဆိုတာက စစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့ပါ။ အိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတာနဲ့ သေနတ်နဲ့ စပစ်ကြတယ်။ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ သူတို့က ကျမညီမလေး ကို ကျမရှေ့မှာတွင် သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ ညီမလေးက အသက် ၇ နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ညီမလေးက ကျမကို ထွက်ပြေးဖို့ အော်ပြောတယ်။ ကျမက သူ့ကို အကာ အကွယ် ပေးပြီး ပြုစုဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဆေးဝါး မရှိဘူး။ သူလည်း သွေးထွက် လွန်ပြီး နောက်တနေ့မှာ သေသွားတယ်။ သူ့ကို ကျမကိုယ်တိုင် မြေမြှုပ်ခဲ့ရတယ်။ မိုးပေါ်မှာ ဟယ်လီကော်ပတာတွေ ပျံနေကြတယ်။ ကျမတို့ ပုန်းနေတဲ့ တောင်ကုန်းကို သူတို့က လောင်ချာနဲ့ ပစ်ကြတယ်။ ကျမအမေနဲ့ အစ်ကိုလေးယောက်က အဲဒီတုန်းက အိမ်မှာ မရှိကြဘူး။ သူတို့အခုဘယ်မှာလဲဆိုတာ ကျမလည်း မသိဘူး။ ကျမအဖေက လွန်ခဲ့တဲ့ တလလောက်ကတည်းက အဖမ်းခံထားရတယ်။ သူသေသလားရှင်သလား ကျမတို့ မသိဘူး။”
A 12-year-old girl from Rathedaung township informed the Team that, “the [Myanmar security forces and Rakhine Buddhist individuals] surrounded our house and started to shoot. It wasasituation of panic – they shot my sister in front of me, she was only seven years old. She cried and told me to run. I tried to protect her and care for her, but we had no medical assistance on the hillside and she was bleeding so much that after one day she died. I buried her myself. There were helicopters in the air – and they used “launchers” to try to attack us when we were in the hills. My mother was outside the house with my four brothers. I do not know where they are now. My father was jailedamonth before this. We do not know why and we don’t even know whether he is dead or alive”.
← ကုလဌာနေကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တာဝန်ပြီးဆုံး
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ ပြည်သူသို့ တင်ပြချက် →